Politika fidirana amin'ny tranonkala | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Fahafahana miditra amin'ny tranonkala
Ny tranokalan'ny Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward dia tokony ho azon'ny olon-drehetra, ao anatin'izany ny zokiolona sy ny olona manana fahasembanana., Rindrambaiko sy Serivisy-Fizarana 8341: Votoatin'ny tranonkala, miaraka amin'ny tanjona ny hanaraka ny ambaratonga "AA".
* Ny fanamarihana "fanarahan-dalàna" amin'ity politika ity dia mifototra amin'ny fanamarihana voafaritra ao amin'ny Komity momba ny fotodrafitrasa momba ny fahazoana miditra amin'ny Internet sy ny fifandraisana "JIS X 8341-3: Torohevitra fanamarihana ny fanarahan-dalàna 2016 ho an'ny atiny Web-Fanontana martsa 2016".
Pejy fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Ambaratonga fampifanarahana kendrena sy fandraisana andraikitra
Mifanaraka amin'ny JIS X 8341-3: 2016 Haavo AA
Ireto manaraka ireto ny singa AAA
JIS X 8341-3 2.2.3
JIS X 8341-3 2.3.2 Fepetra mahomby amin'ny flash 3
JIS X 8341-3 2.4.8 Fitsipika fahombiazana amin'ny toerana misy ankehitriny
PDF (Portable Document Format) fisie
Word (Word (Microsoft Word) fisie
Serivisy omena avy any ivelany sy ny atiny na pejin-tranonkala, sary, horonan-tsary sns.
* Ohatra amin'ny 3.
Serivisy omen'ny google (fikarohana manokana Google, horonantsary youtube, sarintany google, Google Street View, sns.)
SNS (Twitter, Instagram, LINE, sns.)
Pejy misy fiteny maro vokarin'ny fandikan-teny mandeha ho azy nomen'ny subdomain
Atiny tsy an-tsoratra A 〇 〇
Audio sy horonan-tsary ihany (voarakitra) A - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Caption (voarakitra) A - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Fanamarihana audio na atiny hafa ho an'ny media (voarakitra) A - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Caption (mivantana) AA - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Fanehoan-kevitra audio (voarakitra) AA - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Fampahalalana sy fifandraisana A 〇 〇
Baiko misy dikany A 〇 〇
Fiasa manelingelina A 〇 〇
Fampiasana loko A 〇 〇
Fanaraha-maso ny feo A - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Mifanohitra (ambaratonga kely indrindra) AA 〇 〇
Manova habe ny lahatsoratra AA 〇 〇
Sary an-tsoratra AA 〇 〇
Ohatra A 〇 〇
Tsy misy fandrika fitendry A 〇 〇
Fotoana azo ovaina A - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Mijanona, miato ary manafina A 〇 〇
Fotoana tsy miankina AAA - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
XNUMX flashes na latsaky ny sandan'ny tokonam-baravarana A - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Jiro jiro in-XNUMX AAA - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Sakano ny sakana A 〇 〇
lohatenin'ny pejy A 〇 〇
Filaharana mifantoka A 〇 〇
Tanjon'ny rohy (amin'ny teny manodidina) A 〇 〇
Fomba maro AA 〇 〇
Lohateny sy marika AA 〇 〇
Fizahana sary an-tsaina AA 〇 〇
Fiteny pejy A 〇 〇
Fiteny sasany AA 〇 〇
Rehefa mifantoka A 〇 〇
Amin'ny fotoana fampidirana A - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Fikarohana tsy tapaka AA 〇 〇
Mampiavaka miavaka AA 〇 〇
Famantarana lesoka A - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Famaritana na famaritana A - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Soso-kevitra momba ny fanitsiana AA - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Fisorohana ny lesoka (ara-dalàna, ara-bola ary angona) AA - 〇 Tsy misy atiny azo ampiharina.
Famaranana A 〇 〇
Anarana, andraikitra ary sanda A 〇 〇
* Hatramin'ny faha-3 martsa taona Reiwa
Laharana an-telefaona: 03-3750-1611